Websitedị Websitedị Ntanetị 2016 nke Weebụ Ga-atụle Tupu Creatmepụta Saịtị Gị | Martech Zone
Anyị ahụla ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na nhicha, ahụmịhe dị mfe maka ndị ọrụ webụsaịtị. Ma ị bụ onye mmebe, onye nrụpụta, ma ọ bụ naanị ị hụrụ weebụsaịtị n'anya, ị nwere ike ịmụ ihe site na ilele etu ha si eme ya. Jikere mmụọ nsọ!
Hapụ mmalite, ụbọchị ọjọọ nke weebụ, nke jupụtara gifs na-egbu maramara, Ogwe ndị na-emegharị emegharị, bọtịnụ, akara ngosi na ịgba egwu hamster, ihe ngosi taa pụtara imepụta mmekọrịta, mmeghachi omume na-akwalite ịkọ akụkọ na ịnye ahụmịhe onye ọrụ bara ụba.
Ihe atụ nke animation bara ụba gụnyere itinye animations, igodo na menus, hover animations, veranda na slideshows, ngagharị animation, ịpịgharị, na ndabere animations na vidiyo. Lelee saịtị a site na Beagle, usoro nhazi usoro ịhazi:
A pụkwara ịhụ animation na micro mmekọrịta. Iji maa atụ, na LinkedIn, onye ọrụ nwere ike ịdaba na kaadị maka menu popup aghụghọ nke nhọrọ, wee họrọ ịhapụ akụkọ ahụ ma ọ bụ mee ihe ndị ọzọ.
GIF animations nwere (ọ ?ụ?) Amaliteghachiri, enwere ike iji ya maka ọtụtụ ebumnuche dị iche iche, gụnyere ihe ọchị, ngosipụta, na ọbụlagodi maka ịchọ mma.
ihe Design, asụsụ nhazi nke Google mepụtara, na-adabere n'ụdị mbipụta nke mbipụta akwụkwọ-ederede, grids, ohere, ọnụ ọgụgụ, agba, na ojiji nke onyonyo-yana ihe ngosi na nnabata na-agagharị, padding, na mmetụta miri emi dị ka ọkụ na onyunyo iji nyekwuo ezi uche, ihe omumu, na mmekorita onye oru.
Ihe eji eme ihe na-eji onyinyo, mmegharị, na omimi iji nye ọmarịcha mma, ọmarịcha nke oge a na-elekwasị anya n'ịchọpụta UX na-enweghị ọtụtụ mgbịrịgba na whistles.
Ihe omuma atu ndi ozo banyere ihe eji eme ihe bu ihe onyonyo onu ogugu, ihe odide buru ibu, na oghere di ocha.
Ọ bụ ezie na ihe eji emepụta ihe na-enye otu ụzọ maka echiche nke minimalism, mbadamba mbadamba na-anọgide bụrụ nhọrọ kachasị maka ndị hụrụ ahịrị dị ọcha. Nke ahụ bụ, a na-ahụkarị ụdị mbadamba ụyọkọ dị ka ihe ntanetị dị adị n'ezie, nke ziri ezi na nke dị mma.
Dabere na ụkpụrụ nke oghere ọcha, akọwapụtara ọnụ, agba agba, na 2D-ma ọ bụ "mbadamba" - ihe osise, mbadamba ụyọkọ na-enye ụdị dịgasị iche iche nke na-ejikarị usoro dịka akara ngosi akara akara na ogologo onyinyo.
A na-eji ya eme ihe mgbe ị nwere mpaghara abụọ dị mkpa iji kwalite, ma ọ bụ na ịchọrọ ịnye ọdịnaya n'akụkụ foto ma ọ bụ mgbasa ozi, nkesa ihuenyo bụ ụzọ ọhụrụ dị mma iji nye ahụmịhe ọrụ na-atọ ọchị na nke obi ike.
Site na ikwe ka ndị ọrụ họrọ ọdịnaya na ahụmịhe ha, ị nwere ike ịmepụta ahụmịhe ụdịrị ụdịrị nke na-adọta ndị ọbịa ịbanye.
Ewezuga ndị bumpers na ihe ịchọ mma na ụgbọ ala ndị mara mma, "chrome" na-ezo aka na arịa weebụsaịtị - menu, isi, ụkwụ, na oke ala - nke na-ekpuchi isi ọdịnaya.
Nke a nwere ike ịdọpụ uche, na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ ịhapụ ihe ndị ahụ ma mepụta nhazi dị ọcha, na-enweghị njedebe na-enweghị oke, isi, ma ọ bụ ụkwụ.
“N’elu mpịakọta ogige ahụ” bụ akwụkwọ akụkọ na-eme ka elu-ọkara nke ihu peeji nke akwụkwọ akụkọ ahụ. Ebe ọ bụ na a na-apịachi akwụkwọ akụkọ ma tinye ya na igbe na ngosipụta, ọdịnaya kachasị sie ike na-aga n'elu ogige ahụ iji nye ha ohere kachasị mma nke ijide onye nwere ike ịgụ (na obere akpa ha).
Nchịkọta weebụsaịtị ejirila ogologo oge jiri echiche nke mpempe akwụkwọ na ụkpụrụ ịpịgharị bụ ibu. Ma na nso nso a, onyogho na onyogho na-ekele onye ọrụ ma na-agba ume ịpịgharị iji kpughee ọdịnaya ndị ọzọ, nke miri emi.
Video ihuenyo zuru
Vidio nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji dọta mmasị ndị ọbịa, ọ na-adịkarị irè karịa ọhụụ ma ọ bụ ederede. Looping vidiyo dị ka ndị Apple jiri maka Apple Watch bụ ụzọ pụrụ iche iji tọọ ụda ma dọrọ ndị ọbịa.
Pịa site na ịhụ DK New MediaVideo si n'ụlọ obibi ha
N'ihe banyere imewe weebụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-achịkwa ụlọ ọrụ gị, niche, ahịa ebumnuche na ọdịnaya. Nhazi gị ga-adabere na ihe ndị ọbịa zara na ihe kachasị nghọta maka ozi gị. Ma site na usoro ndị a n'aka, ị ga-enwe ihe niile ịchọrọ iji mepụta mkpokọta na-adọrọ adọrọ nke na-eme ihe ịchọrọ ka ọ mee, nke ahụ na-egosi na ị maara etu esi esochi oge.